Xzọ 5 Expo2020 ga - akwalite Economy nke Dubai | Ọrụ - Ọrụ - Economy Njem
Nsogbu Nsogbu nke Dubai
Site na October 20, 2020, ruo Eprel 10, 2021, UAE ga-anabata ụwa maka ememe omenala, mmekorita na ihe ọhụrụ na 2020 World Expo Fair.
Ọ bụ oge mbụ World Expo ga-enwe na mpaghara Arab, ebe ọ bụ ebe Expo 2020 na Dubai. Ruo ụbọchị, ọnụ ọgụgụ nke 190 mba kwadoro itinye aka na ihe omume ngosi nke na-ebute ọtụtụ nde mmadụ n'ime UAE. Isiokwu ahọrọ maka Expo 2020 bụ "Ijikọta Minds, Ịmepụta Ọdịnihu", na isiokwu ndị dị na ya bụ Ịkwụsị, Mbugharị na Ohere.
Njem njem 2020 na Expo ahụ malitere ọrụ na 27th November 2013, mgbe Dubai meriri ikike iji kwadoro obi ụtọ, jubilations na ọkụ ọkụ. A kwupụtara Ezumike Ezumike maka ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ niile gafere mba ahụ n'echi ya. Nke a bụ igosi gị ihe dị mkpa ọkwa ahụ ma mee ka ihe omume ahụ pụta ọ bụghị nanị Dubai ma dum dum na UAE na Middle East. Ọ na-achọ ịhapụ ihe nketa bara uru na nke na-adịgide adịgide nke ga-adịgide ruo ọtụtụ ọgbọ site na oge Expo na-achị.
Ebe E Si Nweta: Gosi 2020 Youtube
Mba ndị na-esonụ kwuru ọkwa ha na Expo 2020:
Mgbasa ozi ahịa na nkwurịta okwu na-aga n'ihu ma na-eduzi nke ọma na ọtụtụ nyiwe. Enwere ọtụtụ njedebe nke Expo site na nkwenkwe ụgha na ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ egosiworị ha na-eme ihe nkiri na-emepụta ihe ọhụrụ na ndị na-eme n'ọdịnihu.
Ewezuga ihe niile dị mma ma ọhụụ dị aṅaa ka Expo 2020 ga-esi emetụta akụ na ụba, oleekwa uru ọ ga-eweta na Dubai n'ozuzu ya?
Ulo oru YouTube nke ulo oru Dubai Expo 2020
Ụzọ 5 Expo2020 ga - akwalite Economy nke Dubai - Gaa na Channel Channel 2020 YouTube
Okike nke oru
Ikike mba nwere ike ịmepụta ọrụ bụ ihe na-egosi na ndị na-ahụ maka akụ na ụba ya na-arụ ọrụ ma na-arụ ọrụ. Ozugbo a na-emepụta ohere ọrụ, enwere obi ike na-ejide onwe ya na-emewanyewanye ego. Ndị ahịa na-eto eto ma na-ekwu okwu n'ozuzu ha, ndị mmadụ nwere ike ịnụ ụtọ ụdị ndụ ha dị mma na akụ na ụba na-echekwa ego. Mgbe a mara ọkwa Dubai dị ka ndị na-ahụ maka 2020 World Expo, e mere atụmatụ na a ga-aha 277, 149 ọrụ n'etiti 2013 ruo njedebe nke Expo na 2021 dabere na ọmụmụ.
A na - emepụta ọrụ ndị a n'akụkụ niile nke akụ na ụba gụnyere njem nleta, ụlọ ahịa, Finance, Ala na ụlọ, ewu, Aviation, Ile ọbịa, Technology, Media & Communications, Ụgbọ njem, Security, Trade na Investment na ọtụtụ ndị ọzọ. Na ngalaba 'Career' nke Ụlọ Ọrụ Expo2020 Dubai, enwere nhọrọ iji nyefee CV ma tinye maka ohere dị iche iche. Ohere inweta ohere ga-adị n'ihu, n'oge Expo na oge mgbasa ozi.
Hụ ọrụ mmeghe niile na Expo 2020
Ugbua, otutu ndi mmadu ejiriwo oru karia oru oru, ulo oru na ndi njem dika ndi oru na-aga n'iru na Expo2020 na ebe ndi ozo di njikere maka October 2020. E mekwara ọtụtụ ọrụ mba ọzọ site na itinye aka na mba dị iche iche. Ndị na-achọ Job nwere ike iji ohere ndị a mee ihe n'ịghọ akụkụ nke akụkọ ihe mere eme na-enye ahụmahụ.
Ebe E Si Nweta: https://www.expo2020dubai.com/en/careers
Boost na Sekit njem
Njem nleta bụ ihe dị oké mkpa n'inwe akụ na ụba nke akụ na ụba UAE. Dabere na Dubai si Ngalaba nke Tourism & Ahịa ahịa, Dubai dere ndeba abụọ na-abawanye na nleta njem nleta na otu oge ahụ n'afọ gara aga. Dị ka njedebe nke nkeji iri na ise nke 2019, Dubai nabatara ndị ọbịa ụwa nke 4.75.
Ihe nkiri Dubai na-egosi nke ọma na map World Map na ihe ndị dị ka Burj Khalifa, The Palm na Burj Al Arab hotel. Ugbua, UAE nwere mba anọ omenala UNESCO World Heritage Sites, na asatọ ọzọ na mbara ala Cultural Heritage saịtị.
Nchịkọta Dubai nke World Expo World 2020 bụ iji meziwanye mmụba nke onye njem nleta na mba ahụ, n'oge na mgbe Expo gasịrị. Echere na nde mmadụ 25 ga-aga Expo 2020 na Dubai n'etiti 20th October 2020 na 10th April 2021.
Ụlọ ọrụ Dubai maka Tourism and Business Marketing (DCTCM) na-arụkọ ọrụ n'aka ụlọ ọrụ gọọmentị nke ndị gọọmentị na-eme ka ọ dịkwuo mfe maka ndị njem nleta na-abata na Dubai iji nweta visa ngwa ngwa. Dubai bụ nnukwu ụlọ ụgbọelu na mpaghara ahụ na ebe dị mfe maka ndị njem na-aga n'ụzọ ọ bụla n'ụwa.
Na 2020 Exposing Ụwa, Dubai aghọwo ihe mara mma dị ka njem nleta, nke a ga-ebute ọganihu na GDP maka uto akụ na ụba nke mba ahụ.
Enwekwuo Ohere Ulo oru
A na-eme ka ndị na-atụba ego nwee obi ike mgbe akụ na ụba na-eto eto ma na-enwe ọganihu. Dika data ndi mmadu nwere onwe ha si n'aka ndi oru aka oru di iche iche nke mba di iche iche, Ulo oru 2020 Dubai maka ubochi ogologo oge nke mba a ga eme ka onodu aku na uba ya site na AED 122.6 billion (USD 33.4) ma kwado 905,200 ọrụ n'etiti 2013 na 2031.
A na-ahọpụta Dubai iji hụ na mmụba nke ego zuru ụwa ọnụ maka ikike ya maka ịbịakwute Expo2020. Inye ego na-adọrọ mmasị na mba ma ọ bụrụ na a mara ya na ọ dị mma, na-anabata, na-aba uru. UAE bu ihe ndi a ma karia na nke oma na mpaghara Gulf na Middle Eastern. A na-emeghe ego maka ebe ahia, ụlọ ahịa, ala na ụlọ & mmepe, ego, ntụrụndụ, njem nleta, iwu, ụlọ ahịa, ụgbọelu na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ugbua ulo ahia di iche iche agbagharia ma o bu meghee alaka na onu ahia na Dubai. A na-arụ ọrụ maka ọtụtụ n'ime ọrụ ndị a. Òtù zuru ụwa ọnụ na nke mba dị iche iche na-eme ka ndị Expo na ndị ọrụ ya kwadoro onwe ha na-egosi na ha na-akpakọrịta na Marketing na Branding. Ma ndi oru ego nke obodo na nke ndi mba ozo nwere ike inwe obi ike na ebe 2020 Expo World na-eme Dubai, ego umuaka UAE kwadoro, ihe ndi ozo ha nwere nchedo ma nwekwaa obibia.
Ebe E Si Nweta: https://www.visitdubai.com/en/business-in-dubai
Meewanyewanye ma mee ka azụmahịa gị sie ike
Dubai dị n'ụlọ ọtụtụ ụlọ ahịa, ndị nwe ya bụ UAE Nationals, ndị na-ere ahịa na ndị na-azụ ahịa na mba ọzọ. Enwere otutu echiche nke ebe obibi nke ga-erite uru site na ulo oru Dubai nke Expo 2020. Ulo oru ndi ozo bu ihe ozo n'eto onodu aku na uba, otutu ndi ochichi na etinye ego na ihe ndi ozo iji gbaa umuaka ahia na uto nke ulo oru. A na-atụ anya na ụlọ ọrụ nke ụlọ, ma nnukwu mba dị iche iche na SME ga-ahụ nnukwu mmụba na oriri na ntinye ego n'ọtụtụ dị iche iche n'Ala Ala, Media, Travel and Tourism, Leisure, Retail and general economic industries.
Enwere otutu ohere ahia na ndi ozo na ndi oru ndi a nile ndi di na ahia. Enwere ike ịchọta ụzọ dị iche iche maka ndị na-arụ ọrụ n'ahịa site na ịchọta na inyefe usoro nke dị maka ohere ị nweta. Expo2020 nwere ụlọ ahịa ụwa zuru ụwa ọnụ na-enweghị ihe ọghọm ebe ọ nwere ike ịchọta ohere achụmnta ego site na ndebanye aha na karịsịa uru SME's. Nke a bụ ụzọ dị irè ahia azụmahịa nke obodo na-achọ ịmepụta ọhụụ ọhụrụ nwere ike igosi ụwa ihe ha nwere inye.
Mmelite na akụrụngwa
Expo2020 ahụwo nnukwu mmepe na akụrụngwa na Dubai na UAE na nnukwu. Ụgbọ njem na-eduga na saịtị Expo dịka okporo ụzọ, ebe a na-akpọ metro na afara na-agbasapụ. E nwere ihe ndị ọzọ na-aga n'ihu n'ịwu ụlọ, ebe obibi, ahụike, na ụlọ ọrụ azụmahịa ndị ọzọ.
Ihe ọmụma dị na-enye echiche na ọtụtụ akụkụ nke saịtị ahụ nwere ike iji ya mee ihe ọzọ, a ga-akpọkwa ihe nkwado a dị ka District 2020 mgbe Expo gasịrị. A ga-ejikọta ihe gbasara akụrụngwa na ihe oriri maka Expo na isiokwu ya nke Nkwado, Mgbanwe na Ohere. Ebe ahụ dịkwa nso n'Ọdụ Ụgbọelu International nke Al Maktoum, Dubai World Central (DWC) na Jebel Ali na nke a ga-eme ka ndị njem na ndị na-achụ ego gaa njem.
A ga-eji ihe ndị ahụ eme ihe n'oge gara aga, n'oge na mgbe Expo gasịrị; na mmetuta maka ulo oru na onodu aku na uba n'ozuzu ya.
Ụzọ 5 Expo2020 ga - eme ka Economy nke Dubai,
Ozi nke tiketi abanyela na mgbanwe nke 1day, 3-ụbọchị, kwa ọnwa na oge ezumike. Ndị ntorobịa na ụmụ akwụkwọ ga-enwe ego; na ohere ịnweta maka ndị kpebisiri ike, ndị 65 na-eto eto na n'elu, na ụmụaka ruo afọ 5.
Ihe ngosi ụwa nke 2020 nyere Dubai ihe ngosi ziri ezi na aha ọma ọ dị mkpa iji tinye nkwenye zuru ụwa ọnụ maka ndị nwe obodo na ndị mba ọzọ. O mekwara ka obi dị elu maka ndị mba UAE na ndị bi na ya, ha ga-ahapụkwa ihe nketa dị mkpa na omenala na akụ na ụba.
Jikọọ na Theresa R. Fianko na Linkedin